Tsiafahy : Fambolen-kazo Ministeran’ny Fitsarana
Firenena Mikambana sy Fitsarana Malagasy : Nitsidika teto Faravohitra ny Mpandrindra ny ONU
Fandraharahana ny Fonja: Fanoitra amin’ny fanompoana ny Tanindrazana
Cour d’Appel d’ Antananarivo : Fianianana sy fametrahana ofisialy ny Tonia Mpampanoa Ambony eo anivon’ny Fitsarana Ambony
Mahajanga : Fotoam-pitsarana manetriketrika nametrahana ny Filoha vaovao eo anivon’ny Fitsarana Ambaratonga Voalohany (TPI) Mahajanga
Mahajanga : Fandrosoan’ireo asa fampifandraisana (digitalisation INFOTPI, INFOTF, INFOTA)
Fandraharahana ny Fonja : Andron’ny DRAP
Toliara : Mpiasan’ny Fitsarana Vaovao
Fandrarahana ny fonja : Fotodrafitrasa vaovao maro notokanana
Fotoam-pitsarana manetriketrika fametrahana ny Filohan’ny Fitsarana Ambaratonga Voalohany (TPI) Toamasina
Fifaninana hidirana ho Mpitsara
Nohalavaina hatramin’ny 31 Mey 2021 ny fetra farany fanaterana ao amin’ny Sekolim-pirenena ho an’ny Mpitsara sy Mpiraki-draharaha (ENMG) Tsaralalàna , na fandefasana ireo antontan-taratasy hiatrehana ny fifaninanana hidirana ho mpianatra ho Mpitsara, voatondro ho tanterahina ny 29 jiona ho avy izao.
Izany no natao dia mba ho hahafahan’ireo izay niharan’ny fahataràna noho ny antony tsy miankina amin’izy ireo hametraka ny taratasy firotsahana (fihidin’ny Faritra sasany, service minimum na fihidian’ny sehatr’asam-panjakana maro noho ny hamehana ara-pahasalamana). Tsy mihemotra kosa nefa ny fotoam-panadinanana
Tribunal de Commerce d’Antananarivo
Fandraharahana ny Fonja : 19 ireo notolorana galona
Published Date: 26 mars 2021
Marika hita maso amin’ny fahamendrehana amin’ny asa. 19 ireo Mpandraharahan’ny Fonja notolorana galona nandritra ny lanonana ofisialy natao ny Zoma 26 Martsa 2021 tao Antanimora.
18 amin’ireo dia « Agents Pénitentiaires » niakatra grady ho » Classe Exceptionnelle » ary ny iray kosa , » Éducateur spécialisé de l’Administration Pénitentiaire » niakatra ho « Principal ». Samy avy amin’ny andiany Fivoarana izy ireto. « Chef instructeur » ary ray mpiahy ny andiany, ny « IAP en Chef » RAJAONARIVELO Lala Harisoa Alain.
Lanonana teo ambany fitarihan’Atoa Tale Jeneralin’ny Fandraharahana ny Fonja (DGAP) ary natrehin’ireo Tale sy Talem-paritra Analamanga ary ireo Mpanabe.
Fandraharana ny Fonja : Fampiakarana galona ireo Mpandraharahan’ny fonja eny Tsiafahy
Published Date: 19 mars 2021
Notanterahina androany 19 Martsa 2021 teny Tsiafahy ny fampiakarana galona an’ireo Mpandraharahan’ny fonja izay miasa eny amin’ny fonjambe eny an-toerana.
Nisy 9 miralahy izy ireo no nahazo ny fampiakarana galona ; « Contrôleur d’administration Pénitentiaire » ny iray ary , « Agents Pénitentiaires » ny valo.
Nanatrika sy nanome voninahitra ny fotoana ny Tale Jeneralin’ny Fandraharahana ny Fonja sy ireo Tale mpiara-miasa aminy eo anivon’ny Minisiteran’ny Fitsarana.